Shina Rectangular Tanks Manufacturing and Factory | Jrain
Ny fiara mifono vy matevina dia afaka amboarina sy vokarina amin'ny endrika samy hafa, habe, loko, matevina, fepetra serivisy, insultoj, conductivities, sns.
Maro ny indostria samihafa mampiasa fiara miforitra matevina ho an'ny rafiny:
1. Fifangaroana tankina, settler, Launder sy ny sisa ho an'ny angovo nokleary sy ny smelt ary ny orinasa mpitrandraka.
Manamboatra ny mpanjifa marindrano ho an'ny tetikasa maro. Ho an'ny tetikasa samihafa, voafantina maro samihafa no voafantina hifanaraka amin'ny toe-javatra misy serivisy. Ny famenoana samy hafa toy ny vovony karbonina dia ampiana koa mba ahafahana mitaky ireo fepetra takiana manokana.
2. Ny tanki-paribolana miendrika sehatra maro ho an'ny vahaolana biogas.
Namboarina ny foza ary mbola manao fiara mifono zoro maromaro arakaraka ny fofona madinidinika mifandraika amin'ny fizotran'ny fako misy rano. Ny injeniera dia injeniera mpiara-miasa aminay izay injeniera Canada voaporofo.
Ny tankina voitsangana toy izany dia misy hatrany amin'ireo internationale voatsangana toy ny baffles, couplings, satroka fitaratra fahitana, sns.
3. fiara mifono vy mifatotra fampidirana rano sy fitsaboana.
Raha oharina amin'ny vokatra metaly na vy, dia manana tombony betsaka ny vokatra plastika vita amin'ny plastika (FRP).
Izy dia tena maivana ary maivana ary azo vokarina amin'ny habeny marobe, izay misy fiantraikany mivantana amin'ny resaka fanitarana ny fiaingan'ny fametrahana sy ny fandaniana amin'ny vidiny.
Raha mila tanky fiberglass misy halavam-baravarankely / haavony manokana ianao, azafady resaho aminay ilay izy, ary afaka manao na inona na inona izahay.
Ny Jrain Team dia miezaka ny hanome ny mpanjifantsika vokatra kalitao sy serivisy serivisy iray mampifandray ny fitantanana ny tetikasa amin'ny injeniera sy famokarana maharitra. Manome serivisy ny Jrain ao anaty fehezan-teny nifanarahana sy fotoanan'ny mpitarika.
Previous: Tavy fitaterana
Manaraka: T tank oblate
Tankina miendrika volontany FRP
Tavy Fiberglass Rectangular
Famolavola grating, Nohavaozina Fiberglass, hamolavola, Fitaovana fanodinam-bokatra Fiberglass, Mamatotra fanamafisana FRP, Masinina fanamafisana GRP,